कथा : असार १७ गते नबिनाको विहे - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : अब रुदैन यि आँखाहरु
गजल : आफैसँग आजकल…. →
कती पटक पढियो : 130
मलाइ नपुग्दो केहि थिएन। दाइ भाउजु छुटिएपनि हजुरबाबाले जोडनु भएको थोरै भएपनि मोतीसरी धानका बाला झुलाइ मानामुरी फलाउने गैह्ी खेत मेरै हो, कुडुलेमा तोरी बहलाउने लामा गरा मेरै थियो। आफनो पाखुरा बजारेर दुइ छाक टार्न पुग्ने नै थियो। किन चाहियो टिनको छानो रानीबनको खरवारी मेरै थियो। किन चाहियो सोलार मेरै तारी भैसी र फुर्के काले हल गोरुका गोवरबाट मेरै घर उज्यालो थियो। सलसल सुसाउदै बग्ने दरौदी र मर्स्याङदी मेरै हिम श्रृखलाका थिए। आपत विपत दुःख अडचन्पर्दा देवी मनकामना कालीका माइ छिक्केश्वरीलाइ सुनाउथेँ उनीकै श्रद्धाभक्ति यो जिवन अर्पेको थिएँ। वन पखेरामा मेरै गाइ भैसी चर्थे, वन्यजन्तु, डाफे मुनाल कोइली चरी नाच्दै,डुल्दै रमाउथे। सँक्रन्ती र एकादशीमा लाग्ने मेलामा खैचडी र मादलुको तालमा मेरै स्वर शोरठी र मारुनी भाकामा धन्कीन्थे। इष्टमित्र नातागोता सबै मेरै थिए।
हेर त असारपनि सकिन लागेको छ पोहोर साल मुखीया बा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बलरामले मेलो सजिलो बनाइदिएर रोपारहरुले छिटै मेलो सकाए, अब आउने असारमापनि मेरो मेलो जसरी भएपनि आउनु पर्छ है। विचैमा कुरा काटथ्यो मोतीले , नबिना मेलामा आएपछि त यसको भाउ नै बेग्लै हुन्छ सबै गलल्ल हास्थेँ। मेरो अनुहार रातोपिरो देखिन्थ्यो। पहेलो पटुकी कम्मरमा बाधि दुइ चुल्ठी बाडेकी पुतली हातका चुरी छिनछिन बजाउदै विउ रोपेर कोइलीको भाकामा असारे गित गाइदिदा सबै हलीहरु गोरु छोडेर हिलो छेप्ने निहुँपारी उतै तिर आर्कषित हुन्थो मलाइ भने डाह चल्थ्यो। ३० डिग्रीको घाम यो ज्यानमाथि पर्दापनि घाम भयो बलाराम भन्दै छाहारीमा बस्न बोलाउथी। म नजिकै गएर उनीले छानेका गहुँको जाडले प्यान्टेभुडी टुनुक्क पार्थेँ। पड्केमुलको पानीले धित मरुन्जेल तिर्खा मेट्थ्यँ। पछाडीबाट कुलोको पानीले झसङगै हुने गरी छ्याप्दा मुर्छा परेर हास्दथी मेरी काली नविना। म अझै घुर्की लगाउदै हुन्थाँ। रिसाएको भनि उल्टै मलाइ नै फकाउथी। कस्तो निश्चल माया थियो।
म त नविनाको विहे प्रति एकदम खुशी छु। नविनालाइ विश्वास लाग्दैन होला, विश्वासपनि कसरी लागेास मुटुको टुक्रा चुडिदा तैपनि के नविनाको खुशी मेरो खुशी होइन र? विनोद नविनाको उज्वल भविश्य हो म त उनीलाइ माया गर्ने एक दुखी मात्र हुँ जो मरेरपनि बाचेको छ र बाचेरपनि मरे सरह छ। अब उनका हातले दाउरा घास गर्नु पर्दैन। कुनै मेलापात गएर जिविकोटार्नु पर्दैन। न त पिढुँमा भारी न थाप्लोमा नै लाम्लो पर्नेछ। विदेशमा श्रीमान् छ कसो होला के होला भन्ने पिर हुनेछैन। मर्स्टनीको बुहारी विनोद जस्तो महामानवको श्रीमति भएर महलमा जिन्दगी विताउनेछिन्। मसँग आएर के पाउथिन् र। मात्र मेरा पलासको फुल जस्तो माया। जसको नाम मात्र फुलको छ न कुनै रुप र सुग्ान्ध नै छ। मेरो माया नविनालाइ त्यस्तै हो। सबै थोक माया मात्र होइन। जसरी हागाँ विगँा विना रुखको शोभा हुदैन त्यसरी नै आधारभुत परिपुर्तिविना मायाको पनि शोभा अनि अश्त्तित्व हुदैन। चुलिदै गएको उनीको वैशलाइ कुठराघात गरि रोक्न सकिन र पिडादायी खुशी दिन चाहिन। नविना प्रति कुनै गुनासो हुने छैन र नविनाले मेरो चिन्ता गर्नुपर्दैन यसमा नविनाको कुनै गल्ती छैन। गल्ती न नविनाको थियो न त मेरैपनि सारा गल्ती त मेरो भाग्यले र मेरो सोझोपनले गरिरहेको छ ।अरुलाइ दोश दिएर म चोखो बन्नपनि सक्दिन। गर्मीले अस्ती भर्खरै पाल्पाको साथी ह्दयघात भएर सुतेको ठाउबाट उठदै नउठि यमलोक पुग्यो।
आफन्त र साथी भाइको सहयोगमा उसको मृत शरिर पाच महिनामा बल्लतल्ल मातृभुमीमा पुग्यो। खै अब मपनि धेरै बाच्दिन होला। छाति पोलीरहन्छ खोक्दापनि रगत आउछ। खाना मिठो हुदैन। शशिर सुकेर विसैली भइसकेको छ। मात्र नविनाको पिर थियो उनीकोपनि राम्रो घरबार हुने भएपछि मलाइ सब थोक बाट सन्तुष्टि मिलेको छ। मलाइ अब जिन्दगीको कुनै मोह छैन। माया मारेर या माया घटाउन यो भनेको जस्तो लाग्छ होला नविनालाइ तर यो यर्थात हो जुन मैले यहा भोगीरहेको छु। म अब नविनालाइ कुरा लुकाउन सक्दिन। यो जुनीलाइ यस्तै भयो अर्को जुनी जन्मजात नविनाको सौभाग्य हुन पाउँ , अहिलेका सारा अधुरा व्याथा कथाहरु अर्को जुनीलाइ साक्षी राख्दै दुइ पन्छी बनेर जस्तो सुकै बाधा अडचन आएपनि सँगै जिउन पाउँ। अलविदा नबिना तिम्रो सुखद दम्पत्यको मँगलमय शुभकामना। सदा खुशी रहनु। तिम्रो सिउदो सजाएको सुन्न पाउँ। म अब जिउदो फर्कनछु कि फर्कन त्यो चिन्ताको विषय भएन्। यदि कतै यतैबाट यमलोक पुगेँ भने म क्षितिजबाट तिमीलाइ चिहाइरहनेछु । लाजले घुम्टो नछोपे ल।
विधा : नेपाली कथा | Suman Bagale. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।